Mareykanka oo dilay jeneraal laf-dhabar u ahaa ciidamada Iran – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Allhadaaftimo January 3, 2020 Uncategorized
Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in ay duqeyn dhanka cirka ah ku dishay Jeneraal Qasem Soleiman oo ahaa madaxa cutub kamid ah ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran oo lagu magacaabo Quds.
Ciidamada Quds ayaa ah ciidan qaabilsan hawlgalada dibadda, kana tirsan ciidamada dalka Iran.
Telefishenka Dowladda Ciraaq ayaa sidoo kale baahiyay in Jeneraal Soleimani uu kamid ahaa dhowr qof oo lagu dilay duqeymo dhanka cirka ah.
Sarkaal katirsan Dowladda Mareykanka ayaa wakalaadda wararka ee Reuters u sheegay in ay fuliyeen duqeynta, laguna bartilmaameedsaday kooxo taabacsan Iran.
“Iyagoo ambaqaadaya amarka Madaxweynaha, ciidamada Mareykanka waxay qaadeen tallaabo wax iska cabin ah oo lagu difaacayo shaqalaaha Mareykanka ee gobolka, waxaana ay dileen Jeneraal Qasem Soleimani,” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Mareykanka.
“Weerarkan waxaa looga gollahaa in lagaga hortago weeraro ay Iran qorsheeneysay in ay fuliso, Mareykankana waxaa uu qaadi doonaa tallaaba walba oo lagaga mamaarmaan ah oo uu ku difaacayo danihiisa iyo dadkiisa meel walba oo ay dunida ka joogaan”, ayaa la raaciyay.
Dilka Jeneraalka ayaa waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran, Javad Zarif oo sheegay in tallaabadaas ay tahay mid khatar ah oo “doqonima ah”.
Dilka Jeneraalkan ayaa dadka darsa arrimaha bariga dhexe waxay aaminsan yihiin in ay dhalin doonta xiisad horleh, lagana yaabo in Iran ay qaado tallaabo aargoosi ah.
Jeneraal Suleimani waxaa uu laf-dhbar u ahaa Dowladda Iran, waxaana ciidamadiisa Quds ay si toos ah uga amar qaataan hogaamiyaha ruuxiga ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Weerarkan ayaa dhacay maalmo un kadib markii dad dhigayay dibadbax ay isku gedaameen safaaradda Mareykanka ee caasimadda Baqdad, kuwaas oo ay isku dhaceen ciidanka Mareykanka ee jooga dhismaha safaaradda.
Wasiirka difaaca ee Mareykanka, Mark Esper ayaa gelinkii dambe ee shalay sheegay in Mareykanka aanu aqbali doonin weerar lagu qaado shaqaalahiisa jooga gobolka, wuxuuna dalka Iran ku eedeeyay rabshadihii ka dhacay safaaradda.
“Weerar nagu la soo qaado waxaa uu la kulmi doonaa jawaab xilligeeda leh” ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga ee Mareykanka.
Waxaa kale oo uu Mareykanka dalka Iran ugu baaqay in ay soo afjaraan hawlaha ay ka wadaan dhismaha safaaradda Mareykanka ee Baqdad.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horay ugu gooddiyay Dowladda Iiraan, ka dib markii uu ku eedeeyay inay ka dambeysay weerarkii lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee dalka Ciraaq.
Dhismaha saraafadda ee Magaalada Baqdaad ayaa waxaa weerar ku qaaday dad mudaharaadeyaal ah oo ka careysnaa geerida maleyshiyaad lala beegsaday weerarro ay diyaaradaha Mareykanka fuliyeen.
Mr Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ugu hanjabay Iiraan, isagoo sheegay “inay magdhow ka bixin doonto” khasaare kasta oo ka dhasha halkaas ama dhimasho.
“Tani ma aha digniin, waa hanjabaad”, ayuu ku yiri qoraalkiisa.
Hase yeeshee, hoggaamiyaha sare ee Iiraan, Ayatollah Ali Khamenei oo hadalkaas ka jawaabay ayaa sheegay in Mareykanku “uusan waxba ka qaadi karin Iiraan”.
Wuxuu sidoo kale sheegay in naceybka ka dhanka ah Mareykanka uu ku fiday meel kasta oo ka mid ah dalka Ciraaq.
Tehran ayaa beenisay inay wax lug ah ay ku lahayd weerarkii lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee Magaalada Baqdaad.
Previous Wafdigii Gudoomiyaha BarlaankaPuntland o si diiran loogu soo dhoweeyey Magalada Midigale
Next Guddomiyaha Golaha Wakiilada Puntland oo lagu soo dhoweeyey degmada Mindigale